ह्यारी केनको ह्याट्रिकसंगै पनामालाई ६-१ ले हरायो इंग्ल्याण्डले
इंग्ल्याण्डले पनामालाई ६ -१ ले हरायो । इंग्ल्याण्डका लागि कप्तान ह्यारी केनले महत्वपुर्ण ह्याट्रिकको योगदान गरे । विस्तृतमा
तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड भिड्दै
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘जी’ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा आज इंग्ल्याण्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसमा बेल्जियमले इंग्ल्याण्डलाई १–० गोलले पराजित गर्दै समुह विजेता बनेको थियो।
इंग्ल्याण्डलाई हराएर क्रोएशिया पुग्यो फाइनल
बुधबार सम्पन्न विश्वकप २०१८ को दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले हराउंदै क्रोएशिया फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो ।
क्रोयसिया भर्सेस इंग्ल्याण्ड कुन टिमले कति तगडा ?
फिफा विश्वकप–२०१८ अन्तर्गतको दोस्रो सेमिफाइन खेलमा क्रोएसिया र इङ्ग्ल्याण्ड आमने सामने हुँदैछन् ।
इंग्ल्याण्ड र क्रोएशियामध्ये कुन राष्ट्र विश्वकपको फाइनलमा पुग्ला ? यस्तो छ विगत
काठमाडौं । रसिया विश्वकपमा आज फाइनल प्रवेशको लागि दुई यूरोपियन राष्ट्रहरु इंल्याण्ड र क्रोएशिया भिड्दैछन् ।
फाइनल प्रवेशको लागि आज इंग्ल्याण्ड र क्रोएशिया भिड्दै
काठमाडौं । आज रसिया विश्वकपमा दोस्रो सेमिफाइनल खेल इंल्याण्ड र क्रोएशियाबीच हुँदैछ । फाइनल प्रवेशको लागि यी दुई राष्ट्रबीच राति पौने १२ बजे लुजिनिकी रंगशालामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
मेसी र एरिक्सनलाई रोकेको मेरो सेन्टर ब्याकले ह्यारी केनलाई पनि रोक्छः क्रोएशियाका प्रशिक्षक
एजेन्सी । क्रोएशियाका प्रशिक्षक ज्लाट्को डालीचले इंल्याण्डको ह्यारी केनलाई रोक्न आफूसँग उत्कृष्ट सेन्टरब्याक रहेको बताएका छन् ।
इंग्ल्याण्ड समर्थकद्वारा लन्डनस्थित स्विडिस कम्पनीमा तोडफोड
एजेन्सी । विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा इंग्ल्याण्डले स्विडेनलाई २–० गोलले पराजित गरेपछि इंग्लिस समर्थकहरुले लन्डनमा अभद्र प्रदर्शन गरेका छन् ।
विश्वकपको सेमिफाईनल खेल कहिले र कहाँ ?
काठमाडौं । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा रसियलाई क्रोएशियाले हराएसँगै विश्वकपको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ । जारी रसिया विश्वकपमा सेमिफाइनलमा यूरोपियन टिमहरु फ्रान्स, बेल्जियम, इंग्ल्याण्ड र क्रोएशिया मात्रै सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।
स्वीडेनलाई हराएर इङल्यान्ड सेमिफाइनलमा
शनिबार सम्पन्न क्वार्टरफाइनल खेलमा स्वीडेनलाई २-० ले हराएपछि इङल्यान्डले सेमिफाइनलमा ठाउं पक्का गरेको हो ।
भोली र पर्सी विश्वकपको क्वार्टरफाइनल खेल
काठमाडौं । रसिया विश्वकपका क्वार्टरफाइनल खेलहरु भोली र पर्सी (शुक्रबार र शनिबार) हुनेछन् । विश्वकपमा ८ राष्ट्रले क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।